Nhau Dzakanaka! Hapana Anoziva Zvauri! | Martech Zone
Chipiri, Zvita 18, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Patronpath iri kukura! Kutenda kune rimwe basa risinganzwisisike nevashandi vedu veSales Support, Vatengesi uye kunyanya mukuru wedu CEO - Patronpath ari kufamba. Kana ini ndichifunga nezveSoftware seSevhisi, hapana muenzaniso mukuru pane online kuraira yeindasitiri yebasa rekudya.
I yakatanga naPatronpath muna Nyamavhuvhu wegore rino. Basa racho rave rakaoma. Mapoka edu ebudiriro aifanirwa kukunda mamwe mabasa akaoma asi achiramba achiendesa. Zvakare, kune zvinonetsa mukati kuchinja mamwe maparadigm muindasitiri yekudyira.
Tiri kuvhura kusangana pamwe nevanoverengeka vePOS vatengesi panguva imwe chete kuburikidza neiyo POS fomati yakavakwa gore rapfuura. Isu tapedza kusanganisa Enterprise Call Center. Vhiki rino, isu tiri kuyedza nyowani Mushandisi Yemukati iyo ichave inoshandura mutambo muindastiri. Hatisi kunonoka - tiri kukurumidza! Tiri kuhaya Wedu wekutanga Akaundi.
Isu tine vadyidzani vanoshanda nesu uye tiri kushandira vatengi kubva kutenderera nyika uye kutenderera pasirese. Kuti uteedzere mapurojekiti edu, isu tinoshandisa musanganiswa we Basecamp (Ehe, IYO Basecamp) uye Google Apps yeBhizinesi Diki.
Tichiri kushandisa Outlook mukati meemail, isu takatangisa akagovana makarenda kuteedzera kwedu kwevatengi kuitiswa. Tinoshandisa Google Docs kugovana uye kushandira pamwe pamagwaro uye maspredishiti. Izvi zvine mikana inosvika kure pane kutumira maspredishiti neemail uye kuyedza kuachengeta ese achigadziridzwa.
Google maHTML musanganiswa wewiki uye Microsoft Office zvese mune imwechete. Iwe unogona kugovera vanhu kubva mukati medomain yako kana kunze kwedomain yako nemaonero uye nekubatana mazinga ekuwana. Isu hatina makambani ari pasi pegumi ane mukana wekuwana zvinyorwa zvakasiyana - neakaongororwa uye enhoroondo nzira imwe neimwe. Chinhu chinoshamisa chishandiso chandingave ndinoda kuita nekambani saizi. Iwe unogona kutogona kuve nehurukuro yekunyora pamusoro pespredishiti yako!
Wakambonzwa nezveGoogle Apps?
Saka… yanga iri nhau dzinonakidza nhasi apo NPD yakazivisa kuti 73% yevanhu vaisatomboziva kuti Google Docs zvaivapo. 94% havatomboziva kuti kune webhu inogadzira masuti kunze uko. Vamwe vanhu mukati meindasitiri yedesktop kurira nekunakirwa - vamwe vakaidaidza kuti kufa kweWebhu App.
Kune avo us mukati ari Software somunhu Service indasitiri, aya matanho akaisa kunyemwerera kumeso kwedu. Pamwe kunyangwe yakawedzera kuseka. Hapana anoziva kuti tiri pano - asi isu tiri kukura. Hatisi kungokura, tiri kuputika.
Ngatitarisei izvi neimwe nzira.
73% vakati vaiziva nezveGoogle Zvinyorwa asi havana kuishandisa? Kwete.
Ko 94% vakati vaiziva nezve zvigadzirwa zvepamhepo zvekushandisa asi havana kuzvishandisa? Kwete.
Ivo vakati havana kumbonzwa nezvazvo. Ah mukomana!
Kana iwe usinga funge kuti izvi zvese zviri zviviri kuungana kwekushambadzira uye mukana unoshamisa wekukura… ungangodaro unoshanda mu desktop software indasitiri. Haisi kufa, iko kuzvarwa!
Kufananidza pakati peHofisi Kunogadzira software uye imwe software sekushandisa sevhisi zviripo. Hapana anoziva kuti isu tiri muchadenga, futi. Mahotera mazhinji nemaketani anotenda kuti vanofanirwa kuvaka yavo masisitimu kana kuvimba neyavo POS mutengesi. Ini ndinenge ndakagadzirira kubheja kuti 99% yeindasitiri yedu haizive kuti isu tiri padhuze.
Tiri kuvimba nazvo!
Tags: A Smart Bearkuenderanamazano emukaticopybloggerdrupalimavexJason CohenJoomlaKugonesa KugonesaSlider
Zvita 18, 2007 na11: 12 PM
Kubvumirana. Ini ndinofunga hazvishamise kuti vanhu vari kushandisa iyo ongororo kutaura kufa kweHofisi 2.0. Uye ramba uchifunga kuti iyo ongororo haitauri chinhu nezve vanhu vangani ndivo uchishandisa sevhisi, kana ivo fanira.
Zvita 18, 2007 na11: 28 PM
Ini ndinofungidzira kuti hapana chisingaiti kune iyo webhusaiti inonzi "Microsoft Watch" ine dongo uye nerima kona pane iyi ongororo. Zvakanyanya kusetsa… vakambonzwa nezve Live Hofisi?
Handina kumbonzwa nezve Patronpath uye mushure mekunge ndashanyira iyi link ini handina kuwana chaizvo zvazvinoita.
Ehe, yedu saiti inotyisa! (Izvo zvakaitwa pamberi pangu) Ndapedza kugadzirisazve saiti uye iri kuvandudzwa izvozvi… tinazvo mumavhiki mashoma!
Zvinonzwika zvinokurudzira kwazvo! Uye zvinoreva kuti isu tichafanira kushanda zvakatonyanya pa Wrike.com kukwidziridzwa gore rinouya 🙂 Thanks for the post!